အင်တာနက်ထဲက .. တွေးကြိုက်ဓါတ်ပုံ လေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » အင်တာနက်ထဲက .. တွေးကြိုက်ဓါတ်ပုံ လေးများ
အင်တာနက်ထဲက .. တွေးကြိုက်ဓါတ်ပုံ လေးများ
Posted by kai on Mar 31, 2011 in Opinions & Discussion, Photography | 10 comments
တွေးတွေးပြီး ကြိုက်တာမို့ .. တွေးကြိုက်ဓါတ်ပုံ တွေလို့ပဲ..ခေါ်ပါမယ်..။
Issei Kato/Reuters Emperor Akihito and Empress Michiko of Japan talked in Tokyo on Wednesday with evacuees from the recent earthquake.
Sukree Sukplang / Reuters | A Buddhist monk sprinkles holy water duringaceremony to mark the delivery of three transport helicopters purchased from Russia, at the army's 11th Infantry Regiment in Bangkok.
Carolyn Kaster / AP | President Obama and one of his daughters walk across the South Lawn of the White House after returning fromatrip to Latin America. The President pointed out her bright orange shoes to the media.
နံပါတ် ၃ပုံက “Boy genius, 12, Challenges Einstein’s Theory of Relativity” အကြောင်းပါနော..။
အိုင်စတိုင်းသီအိုရီ မမှန်ကြောင်းပြဖို့ လုပ်နေတဲ့ Jocob Barnett ပုံပါ..။
တွေ့လား ဒါမှ ဒို့ Buddhist monk ကွ ။
ရွာထဲက ဘုန်းဘုန်းပြောသလို သင်္ကန်းကို ၀တ်နည်းနဲ့ ၀တ်ထားတယ် ။
၀တ်နည်းလား ၀ိနည်း လားဟင်? မသိလို့နော်..
(နံပါတ် ၃ပုံက “Boy genius, 12, Challenges Einstein’s Theory of Relativity” အကြောင်းပါနော..။ အိုင်စတိုင်းသီအိုရီ မမှန်ကြောင်းပြဖို့ လုပ်နေတဲ့ Jocob Barnett ပုံပါ..။) အံ့သြစရာပါလား။ result ကရော ဘယ်လိုလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဟားဟားဟား လေထဲပျံတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ကြီးတောင် ပရိတ်ရေဖြန်းပြီးမှ ပျံလို့စိတ်ချရတယ်။ လေထဲမှာ နာနာဘာဝ ဝိနာဘာဝတွေ တပုံကြီးရှိတယ်။ မှတ်ထားကွ…
ကိုခိုင်ရေ နံပါတ် ၃ ပုံပါအကြောင်းအရာလေးကို
နာမ်ဝါဒီတွေက မတည်မြဲသော သဘောကို လက်ခံတယ်
သူတို့ ပြောတာက ပစ္စည်းကိုခိုင်အောင်လုပ်ရင် မပျက်ဘူး
ကားဆိုတဲ့ မော်တော်ယဉ်ကို ပျက်ပြီလို့ အကြမ်းဖျင်း ဆိုလိုက်တဲ့အခါ
ဘယ်ဟာပျက်လဲ ပြင်ဆင်လိုက်ရင် ကောင်းသွားတာဘဲ…………………တဲ့
နျူကလီးယား စွန့် ပြစ်လောင်စာတွေကို စတီးလ်းအိုးကြီးတွေနဲ့ ထည့်ပြီး ပင်လယ်ရေအောက်မှာမြှုပ်ထားကြတယ်လေ
သစ်သား သုံးခွထောက်သည် တစ်ခုကိုတစ်ခုမှီတည်တယ်တဲ့
တစ်ခုသော ထောက်ကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ ကျန်တဲ့နှစ်ခုသော ထောက်ဟာ ပြုတ်ကျပါလိမ့်မယ်…………..တဲ့
ဒီတော့ကာ စတီးမကလို့ ..စတီးအဘဖြစ်ပါစေ…………….တဲ့
ပုံက ထိုင်းတွေရဲ့ အယူဝါဒ နဲ့ ဆိုင်တယ်။
ဂျပန်ဧကရာဇ် နဲ့မိဖုရား ကို လေးစားပါတယ်၊
တရုတ်ငလျင်တုံးက ၀မ်ကျားပေါင်လိုပေါ့ ၊
No.1 ပုံကို ထင်တာတော့ လူငယ်တွေကို သူတို့နိုင်ငံက လူကြီးတွေက တစ်လေးတစ်စား ဆက်ဆံတယ်လို့ ပြထားတဲ့ပုံဖြစ်မယ်ထင်တယ်။